कर्पोरेट ब्लगिंग भिडियो १: Douglas Karr
डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि:: अन्तर्वार्ता Douglas Karr
बुधबार, जुलाई 7, 2010 शुक्रवार, अक्टुबर 23, 2015 Douglas Karr
Rocky Walls र Zach Downs बाट बाह्र ताराहरू मिडिया तल आयो Highbridge अफिस र चान्टेलको शट भिडियो र हामी दुई जोडी भिडियोको लागि हामीले राख्न चाहान्छौं कर्पोरेट ब्लगिंग सल्लाह साइट।
यो एक शानदार सत्र थियो। कुनै पनि सामग्री स्क्रिप्ट गरिएको थिएन र पूर्वाभ्यास गरिएको थिएन। हामीले शुट गर्नु अघि हाम्रो लक्ष्यहरूको समीक्षा गर्‍यौं:
पुस्तकको विमोचन प्रचार गर्नुहोस्, डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।.
साइट र कर्पोरेट ब्लगिंग प्रचार गर्नुहोस् twitter र फेसबुक.
चान्तेले प्रचार गर्नुहोस् र म बोल्ने र शिक्षित कम्पनीहरूमा कर्पोरेट ब्लगि रणनीतिहरू।
त्यहाँ दुई भिडियोहरू छन्। चान्तेले आफ्नो भिडियोमा २ गोलहरूमा केन्द्रित छिन् र म मेरा दुई गोलहरूमा केन्द्रित छु। हामी आज दिउँसो चान्तेलेको भिडियो देखाउने छौं वा तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कर्पोरेट ब्लगिंग सल्लाह। रॉकीले अन्तर्वार्ता लिएका थिए (तपाईंले देख्नुहुनेछ कि उसले वास्तवमा भिडियोमा देखाउँदैन!) र त्यसपछि हामीलाई केही लिने प्रतिक्रियाहरू परिष्कृत गर्न मद्दत गर्‍यो। अन्तिम परिणाम, केहि राम्रो सम्पादनको साथ, मास्टरपिस थियो जुन तपाईं माथि हेर्नुहुन्छ!
टैग: १२ तारे मिडियाकर्पोरेट ब्लगिडमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।douglas karrसाधाराणकाwiley
ट्रस्ट निर्माण गर्न सामग्री क्युरेसन
डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि:: चान्तेले फ्लान्नेरीको साथ अन्तर्वार्ता